Ian Powell: 8 Sano oo uu Darogo Cunaayay Ka Dib Hadda Waa Milyaneer | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Barnaamijka toddobaadlaha ah ee BBC ee lagu magacaabo The Boss ayaa ah barnaamij taxana ah oo si gaar ah loogu eego taariikhda hogaamiyayaasha dhanka ganacsiga guud ahaan caalamka. Toddobaadkan waxay BBC la hadshay Ian Powell iyo Jackie Hueftle oo ah milkiilayaasha shirkadda Kilter Grips, oo ah shirkad ku taalla Mareykanka islamarkana saameysa waxyaabaha darbiyada guryaha lagu fuulo iyo kuwa lagu qurxiyo.
Ian Powell ayaa soo maray noolal adag ka hor inta uusan ganacsiga bilaabin. Waxaa uu hore uga tirsanaa xulka qaranka Mareykanka gaar ahaan kuwa tartanka fuulidda buuraha horraantii 1990, ilaa 2010. Markii ay da’diisa gaartay 39 ayuu noqday darbi-jiif islamarkana waxaa uu aad u isticmaali jiray oo uu la qabatimay Daroogada.
Waxaa uu xilligaas ku noolaa Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Waxaa uu la qabatimay daroogada nooca Kookeynka loo yaqaano waxaa uuna la daalaa dhacayay sidii uu uga soo kaban lahaa daroogadaasi. Waxaa uu xadi jiray lacagaha si uu ugu isticmaalo daroogada islamarkana waxaa loo diray xabsi ka dib markii uu bixin waayay deen uu bangi ku lahaa.
“Waxaa qorsheeyay burburinta noolasheyda,” ayuu yiri Ian oo noolashiisa dib u milicsaday. Waxaa uu sanaddii 1971-gii ku dhashay Atlanta, Georgia, Ian ayaa xusuusta in jaceylka uu u qabo fuulidda meelaha sareeya ay soo billaabatay isaga oo ay da’diisu ahayd saddex jir ilaa 4 jir.
Balse waxaa uu sidoo kale soo maray xaalad caruurnimo oo adag ka dib markii aabihii oo ahaa dadka daroogada isticmaala uu is dilay markaasi oo ay Ian da’diisu ahayd 10 jir. Ian iyo hooyadii ayaa ka dib u soo guuray gobolka Texas, halkaasi oo uu isaga oo da’a yar ka bilaabay fuulidda buuraha. Waxaa xigtay in uu ku biiray xulka qaranka Mareykanka balse markii dambe waa isaga baxay.
“Waxaan doonayay in aan noqdo qof tartama ee ma doonayn in aan xirfadan noolal ka raadiyo, balse waxaan go’aansaday in aan wax kale qabto,” ayuu yiri Ian. “
Maadaama u lahaa hibo dhanka naqshada ah waxay asaaseen isaga iyo Jackie Hueftle shirkad sameysa waxyaabaha lagu xardho darbiyada iyo kuwa lagu fuulo. Sanaddii 1996 wuxuu asaasay shirkadda eGrips, oo markiiba lagu ammaanay qaabka hal-abuurnimada leh ee soo saaridda qalabka darbiyada lagu dajiyo.
Ka dib markii uu shirkadaasi asaasay ayaa waxaa bilaabatay in lacagta ay iska soo daba dhacdo. Ian waxaa uu sidoo kale hibo u leeyahay sameynta farshaxanada islamarkana waxaa uu bilaabay in uu kumannaan doolar ku sii iibiyo. Waxay lacagahan badan oo soo galaya ay ku dhiirigalisay in uu daroogada barto.
“Ma jirin wax darooga ah oo aan arki jiray, balse waxaan ogaaday in wax walba oo aan u baahanahay aan soo iibsan karo,” ayuu yiri Mr Ian.
“Waxaa agteyda yaalay lacagta , waxaan khasaariyay lacag badan, waxaan ka dib helay daroogada nooca Kookeyn iyo daroogooyiin kale.”
Waxaa uu intaa ku daray in uusan khibrad hore u sii lahayn maareynta guulaha iyo raaxadda islamarkana isticmaalkiisa daroogada ayaa faraha ka sii baxay.
“Waa in aad is liidaa haddii aad doonaysid in noolashaada aad darooga ku burburiso.
“Ma anan awoodin in noolasheyda aan soo leexiyo ilaa aan gunta ka soo taabtay, runtii 8 sano oo noolasheyda ka mid ah ayaan khasaariyay” ayuu yiri Mr Ian
Xiriirka Jackie iyo Ian’ ayaa ah mid dhaafsiisan ganacsiga
Markii xabsiga la dhigay ayay ahayd markii uu Ian ka soo kabsaday daroogadii uu isticmaali jiray. Wareysi uu bixiyay 2013 ayuu ku sheegay in xabsigu ahaa waqtigiisii ugu farxadda badnaa noolashiisa sababto ah noolashiisa ayuu dib u hantay.
Markii uu xabsiga ku jiray sanooyiin ,ayaa Ian la siidaayay. Nin horey ay saaxibo u ahaayeen oo lagu magacaabo An Dan Howley islamarkana lahaa goob jimicsiga lagu sameeyo ayaa Ian siiyay fursad shaqo.
Ka dib Ian goobtaasi ka qabtay shaqo aan caadi ahayn. Jackie Hueftle oo sidoo kale ka shaqeynaysay isla goobtaasi Jimicsiga ayaa la yaabtay xirfadiisa sareysa ee sida uu u sameynayo waxyaabaha darbiyada lagu koro.
Gabadhani ayaa ka dib u bilowday in Ian ay suuq geyso oo xirfadiisa uu soo bandhigo. Hueftle iyo Ian ayaa bilaabay in ay is Shukaansadaan, iyada oo xusuusan akhlaaqdiisa xilligii uu daroogada isticmaali jiray islamarkana mar ayuu xitaa gaariga ka xaday.
” Waan xusuusiyay waxaa uuna dareemay murugo,” ayay tiri .
Mid ka mid ah qalabka ay shirkadda sameyso
Markii wax iibsiga sare u kacay ayuu ganacsiga isu badalay shirkad 2013. Maanta waxay shirkada Kilter Grips sanadkii iibisaa $2.5milyan islamarkana Ian iyo Jackie waa saaxibo dhanka noolash iyo ganacsiga. “Iskaashigeena si wanaagsan ayuu u shaqeeyay sababto ah isaga waa farshaxaniiste anigana waan sii socodsiiyaa,” ayay tiri Jackie, oo 38 jir ah.
Tags: Ian Powell: 8 Sano oo uu Darogo Cunaayay Ka Dib Hadda Waa Milyaneer
Next post Karoona Fayras: Khatar Intee La'eg Ayuu ii Geysan Karaa Haddii aan uur Leeyahay?
Previous post Wadaniyada iyo Ahmiyada ay Leedahay